बलिउडमा ‘ब्राउनफेस’ संक्रमण ! - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
बलिउडमा ‘ब्राउनफेस’ संक्रमण !
जेष्ठ १, २०७७ एजेन्सी
सन् २०१९ को बलिउड फिल्म ‘बाला’मा अभिनेत्री भूमि पेड्नेकर फरक अवतारमा देखिइन् । पर्दामा उनलाई ठम्याउनै गाह्रो पर्थ्यो । कालो वर्णकै कारण रंगभेदको सामाना गर्ने पात्रको अभिनय गर्न उनलाई अचाक्ली काली देखाइएको थियो ।
धेरैले उनको अनुहारमा पोतिएको मेकअपमा चित्त बुझाएनन् । फिल्मको ट्रेलर हेरेपछि अधिकांशले भूमिको आलोचना गरे । भूमिको अनुहारको रंग असामान्य देखाएकै कारण यसका निर्देशक अमर कौशिक पनि विवादमा तानिए ।
निर्देशक कौशिकले उक्त भूमिकाका लागि कालो वर्णको कलाकारलाई लिने सोचे पनि भूमि चरित्रमा फिट देखिएपछि उनलाई लिएको विभिन्न संचार माध्यमलाई बताएका थिए ।
‘बाला’ प्रतिनिधि फिल्म मात्रै हो । पछिल्लो समय बलिउडले धेरै फिल्ममा गोरा कलाकारलाई कालो बनाउने (ब्राउनफेस) को अभ्यास गरेको पाइन्छ । ब्राउनफेस अभ्यासबारे ‘मसान’ निर्देशक नीरज घेवानले सिएनएनलाई भनेका छन्, ‘यो वास्तवमा जातिवाद हो ।’
विशेष गरी सिमान्तकृत समुदायका पात्रको अभिनय गर्नुपर्दा कलाकारको छालाको रंग कालो बनाइन्छ । अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, नवाजुद्दिन सिद्दिकी र रेखाले छालाको रंगकै कारण बलिउडमा भेदभाव सहनु परेको समय समयमा बताएका छन् ।
कालो वा गहुँ गोरो रंगका थुप्रै राम्रा कलाकार हुँदाहुँदै पनि बलिउडले ‘ब्राउनफेस’ को अभ्यास छोड्न सकेको छैन । गत वर्ष रिलिज भएका ऋतिक रोशनको ‘सुपर ३०’ र रणवीर सिंहको ‘गली बोइ’मा ब्राउनफेसको अभ्यास गरिएको छ । फिल्ममा यी दुवैको अनुहार कालो बनाइएको छ । ‘बाला’जस्तै यी दुवै फिल्म बक्स अफिसमा हिट भएका थिए । यस्ता ठूलो बजेटको फिल्ममा कालो वर्णको कलाकारको भूमिका गोरो वर्णका कलाकारलाई किन गर्न लगाइन्छ बलिउडमा ?
निर्देशक घेवान भन्छन् ‘कालो वर्णको भूमिकामा गोरा कलाकारलाई लिने/नलिने फिल्मको बजेटमा पनि भर पर्छ । बलिउडले यसरी नै सोच्ने गर्छ सँधै ।’ जातीयताको गलत प्रस्तुतिले पनि बलिउडमा विविधताको कमी रहेको घेवान बताउँछन् ।
‘द हिन्दु’ पत्रिकाले सन् २०१४ मा २ वटा फिल्मले मात्रै दलित कलाकारलाई प्रमुख भूमिकामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । भारतीय समाजमा व्याप्त जातिय विभेद नै बलिउडमा देखिने गरेको घेवान तर्क गर्छन् । सन् १९५७ को फिल्म ‘मदर इन्डिया’मा एक किसानको भूमिका गर्न अभिनेता सुनिल दत्तको छाला कालो बनाइएको थियो ।
ब्राउनफेस र ब्ल्याकफेसको अवधारणा अमेरिकामा १९ औं शताब्दीतिर थियो । कुनै अल्पसंख्यक, कालाजाति अथवा अन्य जातिको चरित्र निभाउनु पर्‍यो भने त्योबेला गोरो वर्णका कलाकारले मेकअप गरेर आफ्नो अनुहार कालो बनाउँथे । किनकि त्यो बेला कालो वर्णका कलाकारलाई इन्डस्ट्रीमा काम गर्न निषेधित थियो । यो अभ्यास बेलायतमा पनि थियो, जब निर्देशकले सेक्सपियरको नाटकमा अल्पसंख्यक पात्रका लागि गोरो वर्णका कलाकार रोज्थे । केही दशकअघिसम्म पनि ‘ओथेलो’ को भूमिका गोरो वर्णका कलाकारले आफ्नो अनुहारको रंग कालो बनाएर नै निभाउँदै आएका थिए ।
यो अभ्यास हलिउडबाट पनि हटिसकेको छैन । अभिनेता ड्यान अकोर्डले सन् १९८३ को फिल्म ‘ट्रेडिङ प्लेस’मा होस् या रोबर्ट डाउनी जुनियरले सन् २०१२ को फिल्म ‘ट्रपिकथन्डर’मा अभिनय गर्दा होस्, आफ्नो अनुहारलाई कालो बनाएका थिए ।
छाला गोरो बनाउने उत्पादनलाई बलिउडको समर्थन
जातीयता र छालाको रंगको आधारमा हुने भेदभाव बलिउडमा मात्रै सिमित छैन । भारतीय समाजमा अझै मानिसले रंगभेदको सामना गर्छन् । मुम्बईमा हुर्केकी सिमा हरिले विद्यालयमा धेरैले छालाको रंग कालो भएकै कारण मजाक उडाउने गरेको तीतो यथार्थ सुनाएकी छिन् । ‘मलाई मान्छेहरुलाई आफ्नो मुख देखाउन मन लाग्दैन थियो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि म डिप्रेसनको सिकार भइनँ,’ लस एन्जलसमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गरिरहेकी सिमाले आफ्नो बाल्यकाल सम्झिइन् ।
रंगभेद विरोधी अभियानसमेत चलाउने सिमा बलिउडमा मात्रै होइन फार्मेसीदेखि ठूला बजारहरु छाला गोरो बनाउने उत्पादनले भरिएको देख्दा अझै विभेद कायम रहेको स्पष्ट पार्ने बताउँछिन् ।
बलिउडका स्टारहरु छाला गोरो बनाउने क्रिमहरुको विज्ञापनमा गरिरहेका हुन्छन् । ती विज्ञापनमा जातीय विभेद लुकेको भए पनि स्टारको अनुहारले त्यसलाई सामान्य बनाइदिने गरेको सिमा सुनाउँछिन् । समाजले गोरा अनुहारलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेपछि सौन्दर्य सामाग्रीको व्यापार पनि भारतमा बढ्दो छ ।
केही बलिउड स्टारले यस्तो उत्पादनको प्रचार नगर्ने निर्णय पनि लिएका छन् । केही स्टार अझै यस्ता कम्पनीहरुसँग आबद्ध देखिन्छन् । बलिउड स्टार शाहरुख खान वर्षौंदेखि ‘फेर एण्ड हृयान्डसम’को प्रचारमा देखिँदै आएका छन् ।
यस्ता विभेदकारी विज्ञापनविरुद्ध सन् २०१३ मा उजुरी पनि परेको थियो । एड्भर्टाइजिङ स्ट्यान्डर्ड काउन्सिल अफ इन्डियाले सन् २०१४ मा कालो छाला भएको मानिसलाई विज्ञापनमा उदास र विपन्न देखाउन नपाइने नियम बनाएको कुरा सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । अहिले यस्तो विज्ञापनमा सुधार देखिएको कान्सिलले बताएको छ ।
बलिउडमा काम गर्नकै लागि पनि कतिले छाला गोरो बनाउने ट्रिटमेन्ट गराउने गरेको छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुजाता चन्दाप्पा बताउँछिन् ।
‘हामीकहाँ अनुहार उज्यालो बनाउने ट्रिटमेन्टका लागि धेरै मानिसहरु आउँछन् । अधिकांश त बलिउडमै काम गर्न रुचाउनेहरु हुन्छन्,’ उनले भनिन् । उनलाई उपचारका लागि आउनेहरुले सोध्ने गर्छन्– कसरी कालो वर्णको कलाकार बलिउडमा उज्यालो देखिन्छन् ?
उनलाई लाग्छ, बलिउड प्रवेशको लागि छालाको रंग गोरो हुनुपर्ने कुरा मानिसको दिमागमा गढेर बसेको छ । यद्यपि रंगका विषयमा सोचाई फरक हुँदै गएको छ ।
दश वर्ष अगाडि एउटा गैरसरकारी संस्थाले ‘डार्क इज ब्यूटिफूल’ नामक अभियान नै चलाएको थियो । उक्त संस्थाले शाहरुख खानले प्रबर्द्धन गरेको ‘फेर एण्ड हेन्डसम’ क्रिमविरुद्ध अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
संस्थाकी प्रवक्तासमेत रहेकी कलाकार नन्दिता दास अरबौंको सौन्दर्य सामाग्री उपभोग हुने इन्डस्ट्रीमा कालो छालाको कलाकारलाई प्रमुख भूमिकामा लिन अझै समय लाग्ने बताउँछिन् ।
(सिएनएनबाट ।) प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ १५:२९
१० जना संक्रमित भेटिएपछि जेठ ५ गतेसम्म गैडहवा गाउँपालिका सिल गरिने
जेष्ठ १, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा, रुपन्‍देही — रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा बुधबार १० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकालाई शुक्रबारदेखि सिल गरिने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जेठ २ गते बिहान ६ बजेदेखि जेठ ५ गतेसम्म आवतजावत पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले औषधि पसल बाहेक सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय समेत पूर्ण रुपमा बन्द गरी गाउँपालिकाभित्र बिनाअनुमति आवतजावतमा रोक लगाई सिल गर्ने गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष केवटले बताए । यदि कोही बिनाअनुमति अनधिकृत रुपमा गाउँपालिकाभित्र आवतजावत गरेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाभित्र पूर्ण रुपमा आवतजावतलाई निषेध गर्नका लागि आवश्यक थप सुरक्षाकर्मीसहित जनशक्ति पठाउन जिल्ला सुरक्षा समिति तथा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरी पठाउने अध्यक्ष केवटले बताए ।
त्यस्तै गाउँपालिकाभित्रका वडामा स्थायी ठेगाना भई विदेशमा रहेका व्यक्तिको विवरण संकलन गरी जेठ ३ गते भित्र गाउँपालिकामा बुझाउन भनिएको गैडहवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरन्जिवी घिमिरेले बताए । यो बेला कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिलगायतमा कोरोना संक्रमणको आशंका भएकोले उनीहरुको समेत पीसीआर परीक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलय रुपन्देहीलाई आग्रह गर्ने र स्वाब संकलनका लागि प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भैरहवामा अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
बुधबार सार्वजनिक रुपन्देहीका १२ कोरोना संक्रमितमध्ये १० गैडहवा गाउँपालिकाका रहेका छन् । उनीहरु वडा नम्बर २, जोगडाका हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ १५:०४